Ery - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ery
Generic Name: Ery Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ery ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Eryကိုဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ကုသရာမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်။ Eryဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အအေးမိဝေဒနာ၊ တုပ်ကွေးစတဲ့ ရောဂါတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Eryရဲ့ အခြားအသုံးဝင်ပုံတွေအကြောင်း သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Eryကိုဆေးညွှန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျ လိုက်နာသောက်သုံးပါ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆေးအတိုးအလျော့လုပ်ခြင်း၊ စွဲသောက်ခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးအသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များကိုသင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူအားမေးမြန်းပါ။
Eryကိုအခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Eryကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Eryဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Eryကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Ery အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Eryသို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ery ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Eryဟာမိခင်နို့ရည်ကတဆင့် ကလေးဆီရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက် နို့တိုက်မိခင်တွေအနေနဲ့ သတိနဲ့ယှဉ်ပြီးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Ery ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Eryသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ ဆေးသောက်သုံးပြီးအောက်ဖော်ပြပါ ပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတစ်ခုခု ပြလာခဲ့ရင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူသင့်ပါတယ်။
ပါးစပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ မျက်နှာတို့ ရောင်ရမ်းခြင်း
တောက်လျှောက် ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွြဲ ပါးခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Ery နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Eryဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Eryနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ery နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Eryက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ery နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Eryဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်မှာအောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါတစ်ခုခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် Eryမသောက်သုံးခင် သင့်ဆရာဝန်ကို မဖြစ်မနေပြောပြသင့်ပါတယ်။
Myasthennia gravis ခေါ် ကြွက်သားရောဂါတစ်မျိုး
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ery ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Ery ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Eryကိုကိုယ်အလေးချိန် ၅ကီလိုဂရမ် မှ ၁၂ ကီလိုဂရမ်ကြား (အသက် ၃လနဲ့ ၂နှစ်ကြား) ကလေးငယ်များသာသောက်သုံးဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
တစ်နေ့သောက်သုံးရမည့်ပမာဏ – ကိုယ်အလေးချိန် ၁ကီလိုဂရမ်လျှင် ဆေး ၃၀ မီလီဂရမ် မှ ၅၀ မီလီဂရမ်
ကိုယ်အလေးချိန် ၅ကီလိုဂရမ်နှင့် ၇ကီလိုဂရမ်ကြား (အသက် ၃လနှင့် ၆လကြား) – တစ်ကြိမ်သောက်လျှင် eryတစ်ထုပ်၊ တစ်နေ့ ၂ကြိမ်
ကိုယ်အလေးချိန် ၇ကီလိုဂရမ်နှင့် ၁၂ကီလိုဂရမ်ကြား (အသက် ၆လနှင့် ၂နှစ်ကြား) – တစ်ကြိမ်သောက်လျှင် eryတစ်ထုပ်၊ တစ်နေ့ ၃ကြိမ်
Eryကို ၁၂၅ မီလီဂရမ်၊ ၂၅၀ မီလီဂရမ် ပါဝင်တဲ့ ဆေးထုပ်ပုံစံများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ
Eryကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Ery. http://www.doctissimo.fr/medicament-ERY-NOURRISSON.html. Accessed March 04, 2017.